ukususwa kwengubo yokususa ukususa ipeyinti ngenkqubo yokufudumeza induction
Induction ukususwa nokwaleka mgaqo
I-induction disbonder isebenza ngomgaqo woqheliso. Ubushushu buveliswa kwi-substrate yentsimbi kwaye ukudibana kuphukile. Ukutyabeka kususwe ngokupheleleyo ngaphandle kokuqhekeka kwaye kukhululeke kwaphela kwiiarhente ezingcolisayo, okt ukuqhuma kwemithombo yeendaba Oku ngokucacileyo kwenza ukulahlwa kunye nokurisayikilisha inkunkuma kube lula kwaye kungabizi kakhulu. Nokuba ngaphakathi kweentanda kunye nokuqhekeka kumphezulu ukutyabeka kukhutshiwe.
Ubushushu be-HLQ bokufudumeza busebenza ngokudlulisa amandla ngokukhawuleza kwi-substrate yentsimbi, njengesiphumo sokugcina ukufudumeza okulawulwayo komphezulu kunye nokususwa okukhawulezayo kweentlobo ezininzi zokwenza izinto.
Yintoni ukususwa kwento yokutyabeka?
I-HLQ Induction Inkqubo yokususa ukutyabeka sisixhobo sokufudumeza sobume be-state-of-the-art esikhulula ngokukhawuleza ipeyinti kunye nokuqina, ukwakhiwa okuphezulu. Yindlela ekhawulezayo, ecocekileyo nekhuselekileyo yokuqhekeza.
Ukutshisa ukutshisa zinokugqwesa kwiindlela zesiko zokuphungula ipeyinti. Ukuqhumisa okungafunekiyo okanye ukugaya idiski ngokubanzi kukusebenza okunzima kwaye kuza neminye imiba enje ngexabiso lokuvalelwa okanye lokuqulatha kunye nokuqokelela imithombo yeendaba kuqhume, kunye nokucoca okanye ukwahlula izinto zokwaleka zokulahla. Kwiiprojekthi ezininzi zasezidolophini ezi zizinto eziphambili kwaye zibiza kakhulu ukoyisa. Ngelixa, xa iipeyinti zisuswe ngoqheliso, inkunkuma kuphela kukuzigquma okunokuthi kwiimeko ezininzi kutshayelwe okanye kutshayelwe njengayo nayiphi na inkunkuma yeworkshop.
Khu seleko Sebenza indawo: Ubushushu obulawulwayo nobo busendaweni bukhokelela ekunciphiseni okukhulu umsi kunye nothuli olunetyhefu.
lula coca: Izinto zokutyabeka ikakhulu ziyaxobuka kwiiflakes kunokuba zicocwe.
Akukho ngxolo umsebenziAbasebenza bangasebenza kwiindawo zikawonke-wonke ngaphandle kokwenza uphazamiseko.
mobile: Izixhobo zinamagingxi-gingxi kwaye zithembekile kodwa zilula kwaye zinobunzima bokuhamba kwiindawo zokusebenzela.
Ncitshiswa amandla ukusebenzisa: Ukuhanjiswa kobushushu okukhawulezayo, okuchanekileyo nokuphindayo kwenza inkqubo yokususa ukutyabeka isebenze ngamandla.
Indlela yokuguquguquka: Ukufudumeza indawo, ukuskena, isimahla kunye nokuzenzekelayo.
Akukho sithintelo: Inkqubo inokusetyenziselwa indawo ethe tyaba, imijikelezo ejikelezileyo, ngaphakathi / ngaphandle kweekona, omabini amacala e-substrate, ii-rivets ezijikelezileyo, njl.
Ukususwa kwengubo yokuchithwa kusetyenziswa kumashishini amaninzi, njengeenqanawa / zasolwandle, izakhiwo, iitanki zokugcina, iipayipi, iibhulorho kunye nonxweme.
Ukufudumeza ubushushu kubandakanya ukutshintshiselana ngoku kunye nekhoyili yoqheliso ukuvelisa amandla amakhulu e-electro-magnetic. Xa isetyenziswe kakuhle, le ntsimi ivelisa ubushushu ngezantsi kogqume kwi-substrate yentsimbi, ekhokelela ekuthambekeni kwe-bonding ngokukhawuleza nangokulula kumphezulu wentsimbi.
E-Alliance, sisebenzisa le nkqubo ukususa ukugquma kwentsimbi enje:
Iingubo ezininzi ezibandakanya ii-epoxies, urethanes kunye nabanye
Iingubo ezinokucima umlilo (PFPs)
Inamathele kwaye irubberized irabha kunye ne-chlorine yerabha
Ukukhutshwa koThintelo loKhuseleko kwiitanki zokugcina -
The Inkqubo yoHulelo lokuHulela Ukususwa kwetyathisi kulungele kakhulu ukukhawuleza kunye nokusebenza ngokukuko kweendawo ezinkulu okanye ukuhlolisisa ii-weld seams kwiitanki zokugcina. Amava asuka ekusebenzeni kwiitanki ezingaphantsi abonise ukuba iglasi-yefayibha (5-6 mm) inokususwa ngamanqanaba okukhulula ukuya kuthi ga kwi-10-12 m2 / hr. Ngelixa iinkqubo zokupeyinta ngokwesiko zinokususwa kumaxabiso ukuya kuthi ga kwi-35 m2 / hr.
Inkqubo ye-Induction ayivelisi kuphela izibonelelo zoqoqosho ezinkulu ezinje ngamanqanaba aphezulu okutsala kunye nokulahlwa kwenkunkuma encinci, kodwa ikwenza ukuba isebenze ngokusingqongileyo kunye nokusebenza ngokukuko.
Ukukhutshwa koThintelo lokwaNgcwa kweePayipi -
Inkqubo ye-HLQ yokuFudumeza enobunikazi ekususeni ioyile ibonakalise ukuba iyasebenza kakhulu kwimibhobho kunye neeprojekthi zemibhobho ephilayo kwihlabathi liphela. Ngokufanelekileyo nangokukhuselekileyo isusa ukutyabeka okunje ngelahle yamalahle, i-Ebonite, i-3LPE / i-3LPP, irabha kunye nezinye izinto ezilukhuni ezinobunzima ukuya kuthi ga kwi-30 mm.
Ukususwa kwento yokunxiba nge-HLQ Technologies kuyabiza kwaye ayivelisi grit eyongezelelweyo okanye inkunkuma yamanzi, ivelisa amandla amakhulu okonga ekuphatheni izinto, ngakumbi kwiindawo ezikude. Ukulahlwa ngaphandle komngcipheko wongcoliseko lomoya, emhlabeni okanye emanzini.
Ukusebenza umgama ukusuka kwiyunithi ephambili ukuya kuthi ga kwi-100m evumela ukusebenza ngokuguqukayo nangokufanelekileyo. I-HLQ iphuhlise isisombululo selungelo elilodwa lomenzi esusa umngcipheko wobushushu bomhlaba xa usebenzisa inkqubo yoqheliso ngentsimbi. Oku kuye kwayimfuneko kwinkqubo yokufumana ngempumelelo imvume yokusetyenziswa kwimibhobho yeoyile kunye negesi.
iindidi 未 分类 tags ukususwa kwengubo, ukutyabeka ukususwa, ukususwa kwengubo kwipayipi, ukususwa kwengubo kwintsimbi, ukususwa kwengubo kwiitanki, ukufakelwa kobushushu, ukususwa kwengubo yoqheliso, Inkqubo yokususa ukutyabeka, ukususwa kwepeyinti, ukufudumeza ipeyinti yokususa ipeyinti, ukususwa kwepeyinti Post yokukhangela